VAKY BANTSILANA : Aza atao mitanila, sokafy ny Free TV… | NewsMada
Araka ny andininy faha-19 ao anatin’ny fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny zon’olombelona dia mazava fa manan-jo haneho hevitra ny olona rehetra ary manan-jo ahalala vaovao amin’ny fomba rehetra. Raha fehezina dia manan-jo hanana fahitalavitra izy ary hijery izay fahitalavitra tiany sy ahazahoany vaovao. Mbola voasoratra ihany koa ao amin’ny andiny faha-11 amin’ny lalam-panorenana Malagasy izany zo fototra ananan’ny olom-pirenena Malagasy hahalala vaovao izany.
Manan-jo araka izany ny olom-pirenena hijery ny fahitalavitra Free TV. Ka izany no tokony handraisana anjara amin’ilay fanaovan-tsonia tamin’ny antso avo nataon’ny tale jeneralin’ny Vondrona Free amin’ny tkony haneken’ny fanjakana io fanokafana ny fahitalavitra Free TV io.
Raha ny fijery ny zava-mitranga eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao mantsy dia misokatra avokoa ny fahitalavitra rehetra manohana ny fitondrana saingy sakanan’izy ireo tsy hanana izany zo izany ny mpanohitra. Raha ny voalaza teo anefa dia ny lalàna no mamaritra fa zo ny fahalalahana hamantatra ny vaovao misy eto amin’ny firenena ka ho valin’izany dia zo ihany koa ny fahafahana manokatra ny Free TV.
Tsy tokony atao mitanila araka izany ny fitantanana ny firenena ka misy ireo fahitalavitra sokafana ary misy ireo tsy omena izany zo izany. Raha atao indray mijery dia ny fironana sy ny firehana no zo ahafahana manokatra fahitalavitra eto amintsika. Saika ireo olona ao ambadiky ny filoha, eny fa na izy tenany mihitsy aza, mantsy no tompon’ireo fahitalavitra vao nisokatra tamin’ity fitondrana ity ireo.
Mbola tolona io fangatahana ny hanokafana ny Free TV io. Mora anefa ny ady raha toa ka manaiky mora ny fitondram-panjakana hampihatra ny tsy fitanilana. Ho sarotsarotra kokoa raha tsy izay no miseho. Izany no tokony hanohanana ilay antso avo nataon’ny tale jeneralin’ny vondrona Free amin’ny hanaovana ilay fanangonan-tsonia niaraha-nanaiky tetsy amin’ny kianjan’ny Kanto ny sabotsy teo.
Mari-drefy iray hamantarana ny toeran’ny demokrasia marina ihany koa ny fahalalan’ny asa fanaovan-gazety ka ho hita eo ny demokrasia ataon’ity fitondrana ity na ilay tena izy na ilay sadasada.
Une réponse à "VAKY BANTSILANA : Aza atao mitanila, sokafy ny Free TV…"
Rakotoarisoa Maminiaina N 16/05/2017 à 14:45
Efa maro ny lalàna voahitsakitsaka sy tsy arahina eto @ ty firenena ity.Rehefa ho @ tombo-tsoan’ny mpitondra dia hainy tsara ny mampihatra azy.Mirary soa tompoko